Skip Bag, Kitapo fanalana fako, kitapo fako zaridaina - BAOTE
BAOTE INDUSTRIAL GROUP miorina ao amin'ny "peninsula" mahafinaritra ao Qingdao City of China dia orinasa vaovao sy ha-tech izay mandova ny fomban-drazana ary mikatsaka ny fanavaozana. Ny BAOTE Group dia manana sampana telo izay mifantoka amin'ny tsipika fandraharahana samihafa.
Voalohany dia vokatra vita amin'ny vy - Ny karazana bolt mahazatra sy ny fenitra rehetra, ny voanjo, ny mpanasa lamba fisaka, ny visy ary ny fitoeran-tavin-drano, ny fitoeran-javatra vy izay eo amin'ny sehatry ny BAOTE Industrial Manufacturing Co ,. LTD
Faharoa dia kitapo plastika — Karazan-kitapo rehetra, kitapo fanasana paompy beton, kitapo fanesorana asbestos, kitapo lehibe pp; Vokarin'ny plastika True Leader.
Fahatelo dia ny Qingdao Rainbow Tech Co., Ltd, izay mpamatsy paipaika Precast Concrete sy mpamatsy milina plastika. Ny vokatra dia misy ny milina fanaovana fantsom-pamokarana Concrete amin'ny taona 2005 ary namokatra soa aman-tsara ny milina fantsom-panafody radial vertika voalohany tamin'ny taona 2012. Ny tsipika Prestressed Concrete Cylinder Pipe (PCCP) koa dia eo amin'ny sehatra.
Fanontaniana 1: Ahoana no ahafahantsika mampihena ny akanjo anaovan'ny tranom-borona? 1. Ara-dalàna ireo mpanamboatra milina fantsom-boaloboka mitafy faritra mandritra ny fampiasana. Mba hampihenana ny akanjo eo anelanelan'ny ampahany dia tokony handoa ...
Ampiasao indray ny kitapo plastika: misafidiana harona plastika matanjaka vitsivitsy ary ento mivezivezy ao anaty kitapo ahafahanao miantsena amin'ny kitaponao manokana fa tsy entin'ny magazay. Mora entina ny kitapo plastika azo ampiasaina ...
Sehatra teknika: ny zavatra noforonina dia mifandraika amina hook-and-loop mampifandray faritra roa farafahakeliny, toy ny fiadiana amin'ny mpikambana eo alohany. Background: Ny hook-and-buckle dia karazana tady, fehikibo, ...
Omeo anay ny mailakao dia havaozina isan'andro miaraka amin'ireo fisehoan-javatra farany farany, amin'ny antsipiriany!
Bolts amin'ny kalesy, Bolt firafitra, U Bolts, Lag Bolts, Hex Bolts, Masinina Sodina Pipe,